LALAM-PIRENENA FAHAFITO : Taksiborosy iray nahitana rongony milanja 5kg
Hatramin’ny fiandohan’ny taona 2019, dia saika nahazahoana loharanom-baovao mafampana hatrany ny fahatrarana rongony entin’ireo taksiborosy, ao koa ireo tany amina hektara maro ambolena izany, ireo mpivarotra sy ireo tanora sarona eo am-pidorohana. 12 septembre 2019
Matetika iny lalam-pirenena fahafito iny no tena ahitana azy hatramin’izao. Misy ireo olona mpivarotra, mpandray ny entana eto Antananarivo izay vidiana sy jifaina tokoa raha ny tatitra voaray matetika momba izany. Efa nisy ireo olona nosamborina voasaringotra amin’ny raharaha saingy ny mahagaga anefa dia toa tsy mbola mazava tsara hatramin’izao ny tena tompon’andraikitra sy ambadika amin’ny fanaparitahana zava-mahadomelina eto amintsika.
Lasibatra ny tanora vao erotrerony
Ho an’ny eto an-drenivohitra manokana izao raha ny angom-baovao voaray nisesisesy dia zatovolahy manodidina ny 15 ka hatramin’ny 25 taona eo no sarona amin’ny fifohana rongony. Saika ny ankizy tsy manan-katao lasa mpanendaka sy mpanao halabotry sy ireo toerana eny amin’ny faritra iva toy ny eny Ambodin’Isotry, Andavamamba, Ampefiloha, no nahitana tranga betsaka. Etsy andanin’izay ireo olon-dratsy mpandroba. Eo anatrehan’ireo seho indrindra no atahorana amin’ny taranaka fara mandimby izay tokony handraisan’ny fitondram-panjakana fepetra hentitra.
Raha tsy hilaza afa-tsy ireo voly rongony amina hektara maro fotsiny. Nisy ihany ireo efa nogiazana tany amin’ny Faritra atsimo saingy mbola manjavozavo amin’ny rehetra toa tsy misy tohiny intsony ny raharaha ankehitriny. Ny ankabeazan’ireo mpanara-baovao no miandry sy liana hamantatra izay ambadik’ity rahararaha ity, ankoatra ny vahaolana famongorana izany.
Raha ny tatitra voaray avy amin’ny Polisim-pirenena voaray omaly, ny 07septambra 2019 lasa teo tokony ho tamin’ny 09 ora alina dia nisy taksiborosy mampitohy an’ Ambalavao sy Fianarantsoa no nahatrarana kitapo iray feno rongony milanja 5kg.
Sakan-dalana nataon’ny Polisy teny amin’ny lalam-pirenena fahafito teny Ankidaona no nahatratrarana ity rongony ity rehefa nisy ny fisavana ny entana noentin’ilay fiara. Noentina avy hatrany tany amin’ny paositry ny Polisy nanaovana fanadihadiana moa ilay lehilahy 22 taona tompon’ilay entana ka rehefa natolotra ny Fitsarana dia nidoboka am-ponja vonjy maika ny 09 septambra lasa teo. Tsikaritra hatrany fa ataon’ny mpitandro filaminana sava hao mihitsy lalam-pirenena fahafito manoloana ireo gaboraraka be dia be, eny fa na dia mbola misy ihany aza ny indro kely.